Ifulethi elise-Farmton River Cottage - I-Airbnb
Ifulethi elise-Farmton River Cottage
Windsor, Connecticut, i-United States
Uma unesifiso sokushaywa wumoya nomuntu okhethekile, le ndawo ihlanzeke ngokucophelela futhi inethuba lokuzijwayeza ukuziqhelelanisa komphakathi ngenkathi uphumula futhi ujabulela uMfula i-Farmton. Imizuzu engu-15 kuphela ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Bradley, imizuzu engu-5 ukusuka esitimeleni nase-I91. Imvelo, ukudla, konke ngaphakathi kokushayela okunethezekile. Uthola konke lapha! Indawo yangasese enendawo yayo yokungena, ikamelo lokulala elilodwa negumbi lokugezela elisanda kubuyekezwa, igumbi lokuphumula elithokomele elinendawo yokubasa umlilo e-Garden Level Unit. Ngaphandle kokupaka emgwaqweni kuyatholakala.
Ngaphezu kwekamelo elinethezekile elinombhede owodwa ogcwele negumbi lokugezela langasese, uzoba nesiqandisi esincane, umshini wokwenza ikhofi, ne-microwave. Kukhona nebhodwe elincane le-crock kanye ne-burner kagesi yokupheka izidlo ezincane. Kukhona igesi grill ngaphandle, esingabelana ngayo. Ngaphezu kokusetha i-al fresco dining kukhona itafula lokuphakama kwekhawunta elinezihlalo ezimbili kanye nosofa ababili abantofontofo kakhulu bokudla phambi kwe-TV noma indawo yomlilo, noma i-npping!
Lena indawo engumakhelwane nomndeni, indlu yami ihlezi emgwaqweni wangasese ekugcineni komunye, ngakho akukho okuningi okuhamba phambili ekugcineni kwami. Ngihamba ngemoto nje imizuzu emihlanu ukusuka edolobheni i-Windsor, lapho njalo ngoLwesine ntambama ungajabulela imakethe yabalimi (yezinkathi zonyaka). Kukhona izitolo zekhofi ezinhle nezindawo zokudlela kanye nohlaza oluhle ongakujabulela. Kukhona i-kayaking nokudoba, kuye ngesikhathi sonyaka, nokuphila kwezinyoni eziningi. Ngibone ama-herons aluhlaza okwesibhakabhaka, ama-bald eagles, nama-geese amaningi namadada, ngaphezu kwamahlathi, amakhadi, ama-bluejays, ama-finches, nokuningi. Izinhlanzi zamafudo zasendle zithanda ukuchitha isikhathi egcekeni lami entwasahlobo.
Ukuze uzizwe usemadolobheni, i-West Hartford ne-South Windsor zihamba ngemizuzu engu-10-20 ngemoto, kuye ngomgwaqo. Izitolo eziningi ezincane nezindawo zokudlela emigwaqweni. Futhi imikhosi eminingi ehlobo, imikhosi emihle yasekwindla kanye nokokuwina ngeposi!
Ngihlala phezulu nakuba izindawo zihlukene. Ngitholakala ukusiza nganoma yimiphi imibuzo ongaba nayo. Nginenja eyodwa, uMnumzane Magoo, osekhulile, okhubazekile ngokubukeka, futhi onobungane obukhulu! Ungase futhi ubone ukwengezwa okusha, ikati lami ngo-August! Unelukuluku lokwazi futhi uyakuthanda ukuhlola ukuze abone ukuthi kwenzekani. Indawo yompheme ingahlanganyelwa nami, kodwa kunendawo evulekile yobumfihlo, ngisho nasezindongeni. Igceke elingemuva ukuya emfuleni ligcinwa lihle ngokwemvelo kodwa kukhona izitebhisi zokungena emfuleni.
Ngihlala phezulu nakuba izindawo zihlukene. Ngitholakala ukusiza nganoma yimiphi imibuzo ongaba nayo. Nginenja eyodwa, uMnumzane Magoo, osekhulile, okhubazekile ngokubukeka, futhi…
Hlola ezinye izinketho ezise- Windsor namaphethelo